Amaphrojekthi - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
I-YALIS Design ingakunikeza izidingo zehardware yomnyango wezakhiwo, kusukela kuzibambo zomnyango kuye kumahinji eminyango, izivalo zeminyango kuye ezibukelini zeminyango, onogada beminyango ukuya kumabhawodi eminyango kanye nesivalo esiseduze, i-YALIS ikuthola uchungechunge lwesixazululo se-hardware yomnyango esekelwe ku-zinc alloy, i-aluminium alloy kanye ne-stainless. hardware yensimbi.
I-YALIS Design ingavumelana namaphrojekthi akho okwakha, futhi nanka amanye amaphrojekthi wethu wokwakha nezakhiwo ezisezingxenyeni ezihlukene zomhlaba.
I-International Lake City itholakala e-Chongqing, unjiniyela yi-Xiangjiang International China Real Estate Co., Ltd. Le phrojekthi ibihlanganisa kokubili ezohwebo nezindawo zokuhlala, njengamahhotela, ama-villas, amahhovisi, amafulethi, nokubuka izivakashi.I-YALIS ihlonishwe ngokubamba iqhaza kule phrojekthi futhi ibe yilungu elilodwa lokuhlinzeka ngokufakwa kwezingxenyekazi zeminyango.
I-Australia River-stone isiguqulelwe ku-YALIS BF74204 uchungechunge lokukhiya okuhlukanisayo kuyo yonke iphrojekthi yayo.Ngokwaneliseka ngekhwalithi, i-YALIS isiqale ubudlelwano obusebenzisanayo besikhathi eside emakethe yase-Australia.
Ukuqhakaza kwe-Da Nang
I-Blooming Tower iphrojekthi yokuqala yamawele eDolobheni laseDa Nang eyaqalwa ukwakhiwa ngoJuni 2008 ngesilinganiso sokwakhiwa kombhoshongo ngamunye onezitezi ezingama-37.Izinto ezinikeziwe: I-Smart lock ye-HIONE umnyango omkhulu wefulethi kanye nokhiye onezinsiza ze-Yalis.
I-Autumn Garden itholakala eShanghai, indawo ye-CBD.Bamukele uchungechunge lokukhiya okuhlukanisayo lwe-YALIS BF7037 kuyo yonke iphrojekthi yayo.Ukuhlanganisa ama-villas ane-hardware yomnyango wekhwalithi ephezulu, chaza izindlu zenziwe.
Ihhotela Baltschug Kempinski eMoscow
Izibambo zeminyango yochungechunge lwe-YALIS BF, zisetshenziswe eHotel Baltschug eKempinski, eMoscow.I-YALIS, umhlinzeki othize wokukhiya iminyango wephrojekthi.
Iziphethu zeJordani kwa-Israyeli
I-Israel Jordan Springs iphrojekthi edumile ehlanganisa amachibi angu-3, ​​izitolo ezinkulu, nezivande.Kuyiphrojekthi engaba ngu-230 hm² esebenzisa i-YALIS BF74223 & BF74229 yokhiye wokuhlukanisa isikhathi sonke.